Gullspång | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Gullspång
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 28 10 2019
Gullspång waa degmada yar oo uu ku taalo inta uu dhaxeeyso labado wabiyaasha Vänern iyo Vättern ee Iswiidhan ugu weeyn. Ayadoo leh dad kor yar dhaafaayo 5 300, Gullspång waa degmad fiican oo raaxo leh. Xaafadaha ugu weeyn ee degmada waa Hova iyo Gullspång.
313 kiilomitir oo laba jibaaran
Mariestad 35 kiilomitir
Kristinehamn 55 kiilomitir
Skövde 72 kiilomitir
Örebro 85 kiilomitir
Karlstad 98 kiilomitir
Göteborg 207 kiilomitir
Stockholm 280 kiilomitir
Degmada waxaa ku yaalo guriyaal la kireeysto iyo guryo la bar iibsado labadaba.
Guriyaal la kireeysto oo banaan waxaa laga heli karaa Gullspångsbostäder AB.
Afka iraan/dari, af faarisi, af bashto, af tigrinya, af tigre, af lingala, af swahili, af fransiis, af ingriis, af carabi, af soomaali.
Degmada Gullspång waxaa ku taalo kaniisada Iswiidhan, kaniisada bingist iyo kaniisada faafinta.
Waxaa inta ku yaalo waxaa ka mid ah dukaamo, maktabad, maqaayado, kafeteeriyo, goob jimicsi iyo farmashiye.
Degmada Gullspångs qofka waligiis uma fogo dabasha, halkaan waxaa ku yaalo Bartfoten gudaha Otterbäcken, Skagersviksbadet gudaha iyo goobta dabaasha Otterbergets bad ee gudaha Hova.
Degmadan waxaa ku yaala hoyga caruurta keligood yimi iyagoo aan waalid la socon.
Warbixin dheeraad ah ka eeg bogga intarnatka ee degmadan.
Degmada Gullspång waxaa ku taalo dugsiyaal xanaano ee gudaha bulshadooyinka Otterbäcken, Hova iyo Gullspång.
Gullspång waxaa ku yaalo iskuul loogu tala galay fasalada 0 – 9, Hova gudaheedna fasalka 0 – 6. Dugsi sare waxaa ku yaalaa Mariestad.
Gudaha bulshada Otterväcken waxaa ku taalo xarunta waxbarashada SFI iyo xarunta waxbarashada ee barashada bulshada. Jaamacad waxeey ku taalaa Karlstad, Skövde iyo Örebro.
Warbixin dheer ah ka fiirso bogga degamada.
Xaafadaha Gullspång iyo Hova waxaa ku yaala labo rug caafimad. Gullspång waxaa ku yaala daryeelka ilkaha.
Degmada Gullsång waxeey balansataa markii loo baahdo xafiiska turjumaanka ee Mariestad.
Xariir baseed oo la lee yahay Västrafik ayaa halkaan ka jiro. Sido kalena Hova xariir tareeneed ee Västtrafik ku xiran ayaa ka jiro.
Warbixin dheeraad ah ka eeg bogga intarnatka ee Västtrafik.
Shaqo dhiibaha ugu weeyn degmada waa xafiiska degmada Gullspång. Howlaheena gudaheed waa gaar ahaan kuwo iskuulka iyo xanaaneeynta waayeelka, waxaa loo baahan yahay badana shaqaale ku meel gaar ah ee mudo gaaban iyo mudo dheer. Sido kale halkaan waxaa ka jiro warshado-sameeyn iyo shirkadooyin yar oo qandaraas.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Gullspång